पिपिई सेट लगाएको वेला फोन उठाउन नसक्दा डा. शेरबहादुर पुन कारबाहीमा - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
डा. शेरबहादुर पुन जसले भाइरोलोजीमा जापानबाट पिएचडी गरे, जसले टेकु अस्पतालमा १८ वर्षदेखि सेवा गरिरहेका छन्, सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला– उनी त्यहाँका स्थायी कर्मचारी होइनन् । हो, उनी १८ वर्षदेखि करारमा छन् । योबीचमा उनले सार्स, मलेरिया, कालाजार, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, स्वाइनफ्लु, डेंगुजस्ता संक्रामक रोगको बहादुरीपूर्वक सामना गरे, पुरस्कारमा सरकारले उनलाई अस्पताल छाडेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेको छ । त्यो पनि देश र दुनियाँ कोभिडजस्तो महामारीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको वेला ।
जनचेतनाका लागि लेख्दै र बोल्दै आएका पुनको शैली सरकारलाई मन परेको थिएन । यस्तो काम मन्त्री र वरिष्ठ कर्मचारीले गर्ने हो भन्ने मान्यता उनीहरूको छ । फ्रान्सबाट आएकी युवतीको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयमा भव्य पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेका थिए, जब कि बिरामीको उपचार गरिरहेका डाक्टरहरूलाई यो विषयमा जानकारी नै दिइएको थिएन । अर्को केस भेटिएपछि पनि मन्त्री ढकालले नै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । तर, ६ चैतमा दुबई हुँदै आएका व्यक्तिलाई कतार भनिदिएपछि अन्योल बढेको थियो । कतिसम्म भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ६ चैतमा कतारबाट आएको जहाजका यात्रुको सूची खोज्न थालिसकेको थियो, तर जहाज दुबईबाट आएको भन्ने खुलेपछि यस्ता मेडिकल रिपोर्ट मन्त्रीले सार्वजनिक गर्न छाडेका छन् । तर, विज्ञ डाक्टर आमसञ्चारका माध्यममा बोलेर ‘हिरो’ हुन खोजेको भन्दै मन्त्रालय आक्रोशित थियो । त्यही आक्रोशको परिणामस्वरूप डा. पुनलाई अस्पतालबाट मन्त्रालय सारिएको हो । तर, सरकारले अहं प्रकट गर्दा यो संकटको वेला टेकु अस्पतालले एक विज्ञ डाक्टरको सेवा गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।